Rayson | matrik na-ehi ụra
Rayson na Rayson Mpaghara, Huasha Road, Shashan, Foshan High South Mpaghara, Guangdong, China. Isi Ngwaọrụ China (Marriott / Hilton) Nchịkọta Otuto Eurotop 5 Startory Hotel Matra Elicers-. A na-eji Martoott / Hilton) na nkwari akụ Eurotop 5 Start Hotel Mational Matisition ike nchekwa na teknụzụ nke rayon. Ntughari Ugboro ugboro, subledsess nke eletriki, ma ọ bụ na teknụzụ usoro iwu usoro iwu usoro iji mee ka eletrik zuru oke. Ọ nwere ike inye ndị ọrụ ihe kachasị ụra na ahịa. Ọ bụ ndị na-eku ume elu, ma na-arahụ mmiri ma na-ebelata ahụmịhe nke ọsụsọ. (Marriott / Hilton) Nchịkọta Ototop 5 Start Hotel matraasi Ọnụahịa ngwaahịa a bụ asọmpi ma a na-ejikwa ya ugbu a n'ahịa.
Rayson na Rayson Mpaghara, Huasha Road, Shashan, Foshan High South Mpaghara, Guangdong, China. Isi Ngwa Ọkachamara China (Marriott / Hilton) Nchịkọta Otuto Eurotop 5 Startory Hotel ndị na-emepụta ihe
Ezubere rayson n'usoro na usoro mmepụta mba ụwa.
Anyị na-ekwe nkwa na ezigara ndị ahịa na nchekwa na ụda. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere anyị, kpọọ anyị ozugbo. Ruo ugbu a, Rayson gafere asambodo usoro nchịkwa mba ụwa. Ngwa ahịa niile gụnyere ngwaahịa ọhụrụ anyị na-eweta na usoro ọhụụ, mma, na ọnụahịa asọmpi. Mgbe anyị mmepe afọ gasịrị, anyị ebilitela mmekọrịta dị ogologo oge na ndị ahịa anyị ogologo oge n'ụwa niile. Biko nwee obi ike na anyị nwere ikike mbupụ ngwaahịa anyị na mmebi iwu agaghị enwe na ngwongwo ndị enyerela. Anyị ji obi anyị niile nabata ajụjụ gị ma kpọọ.
Ogologo oge ole ka m ga-esi jee? Matraasi ọ bụla dị iche. Ọ bụrụ na ị na-atụgharị n'abalị ma ọ bụ teta ya na mgbu ọ bụ oge iji nweta matraasi ọhụrụ n'agbanyeghị afọ ya. Anyị na-akwado ịlele mkpado Iwu ma dochie ma ọ dịkarịa ala afọ asatọ. Kedu usoro ịkwụ ụgwọ ị na-anabata? LC na anya / site na TT, site na 30% ego na 70% na - emegide akwụkwọ mbupu Wininin 7 na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ gị? Ee, anyị na-eleta ụlọ ọrụ anyị n'oge ọ bụla, anyị dị nso na ọdụ ụgbọ elu mba ofesi, ọ na-ewere otu awa, anyị nwere ike ịhazi ụgbọ ala iji bulie gị.
Na Rayson, Mmelite teknụzụ na ihe ọhụrụ bụ uru anyị. Ebe ọ bụ na o guzobere, anyị na-elekwasị anya na ịhazi ngwaahịa ọhụrụ, imeziwanye ogo ngwaahịa, na ijere ndị ahịa ozi. Ihi ụra na-ehi ụra mmiri, anyị etinyela ego na ngwaahịa R & D, nke na-eme ka ọ dị irè nke mmiri mmiri. N'ịdabere na ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ndị ọrụ anyị, anyị na-ekwe nkwa na anyị na-enye ndị ahịa ngwaahịa kachasị mma, ọnụahịa kachasị mma, na ọrụ kachasị mma. Nabata ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla. Nzụlite ngwaahịa dịgide adịgide. Nchikota ya nwere nchebe na mpaghara inconspicious bụ n'efu site na nnukwu ma dị larịị.